NAXDIN: Xiddig Reer Nigeria Ah Oo Wadnuhu Istaagay, Murugada Geeridiisa Oo Loo Fadhiyo, Ciyaartii Oo Lagu Kala Yaacay Iyo Sidii Wax U Dhaceen – Cadalool.com
NAXDIN: Xiddig Reer Nigeria Ah Oo Wadnuhu Istaagay, Murugada Geeridiisa Oo Loo Fadhiyo, Ciyaartii Oo Lagu Kala Yaacay Iyo Sidii Wax U Dhaceen
Waddanka Turkiga waxa toddobaadkan ku geeriyooday xiddig u dhashay dalka Nigeria oo wadne xanuun kusoo booday isagoo ku jira ciyaar socotay oo ka tirsanayd horyaalka waddanka Turkiga.
Laacibka geeriyooday oo lagu magacaabi jiray Ekundayo Ebenezer Mawoyeka ayaa dhulka ku dhacay xili ay socotay ciyaar u dhaxaysay kooxaha Sarayköyspor iyo Yeşilköyspor oo Axaddii wada ciyaaray, waxaana laacibkan markiiba loola cararay cusbitaalka oo inyar kaddib shaaciyey inuu u geeriyooday wadne xanuun.
Ciyaartooyada garoonka ku jiray iyo garsoorihii kullanka dhexdhexaadinayey ayaa mar kaliya ku war helay Ekundayo Ebenezer Mawoyeka oo dhulka ku dhacay daqiiqaddii 35aad ee qaybtii hore ee ciyaarta, waxaana degdeg usoo gaadhay dhakhaatiirtii garoonka joogtay oo iyagoo madaxa haysta ka dhex-qaaday laacibka oo ay muuqato in ay naftu ka baxday.
Labada kooxood ayaa galay jewi murugo leh, iyadoo ciyaartooyada qaarkood ilmaynayeen, waxaana si degdeg ah loo joojiyey ciyaarta oo lagu amray ciyaartooyadu inay garoonka ka baxaan, maadaama ay indhahooda ku arkeen xiddig daqiiqado ka hor la ciyaarayey oo saaxiibkood ahaa oo haddana meyd ah.
Warbixin ay soo saartay kooxdiisu ayaa lagu sheegay in geerida Mawoyeka ay naxdin weyn ku abuurtay, aadna uga murugaysan yihiin, laakiin dhinaca kale dalka Nigeria ayaa baroor-diiq looga samaynayaa.
Sannadihii u dambeeyey, dhawr ciyaartoy oo Afrikaan ah oo u badan Nigeria iyo Cameroon ayaa sidan oo kale ugu geeriyooday wadne xanuun kusoo booday.